नवीन रायमाझी - कान्तिपुर समाचार
हामी अमेरिका बस्नेका दुख
केही समय पहिले सँगै काम गरेको एक जना नेपाली भाईसँग अचानक भर्जिनियामा भेट भयो । एक घण्टा कुरा गरेर बस्दा उनको फोनमा तीन/चार पटक म्यासेज आयो ।
काठमाडौँको ठमेलमा रहेको र हिमाली जिल्लाको नाम भएको ट्राभल एजेन्सीबाट हाल दक्षिण अमेरिकी देश एल साल्भाडोर र होण्डुरसको नागरिकता बनाई दिने र त्यसपछि अमेरिका सजिलै जान सकिने भनेर दलालहरु परिचालन भएको र इच्छुक ब्यक्तिहरु उत्साहित भएर अमेरिका गएर कस्तो जीवनशैली अपनाउने हो भनेर आफुलाई मानसिक रुपमा तयार गर्ने क्रममा छन्, जो लगभग असम्भब छ ।
जानकारीको अभाब र सिक्न वा जान्ने इच्छा नहुँदा वा त्यो क्षमता नहुँदा अमेरिका बस्ने अधिकांस नेपालीहरुको अबस्था न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल भनेको जस्तो छ ।
नवीन रायमाझीका लेखहरु :
अमेरिका : श्रम गर्न सिकाउने ठाउँ
पंक्तिकार अमेरिकाको सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक अबस्थाको बारेमा बहस गर्न सक्ने बौद्धिक हैसियत राख्दैन । तर, यसै समाजमा बसोबास गर्ने भएको कारण धेरै कुराहरु देखिन्छ, सुनिन्छ र भोगिन्छ, जसलाई नकार्न सकिन्न ।
मनमा एउटा र बाहिर अर्कै कुरा
भारतका प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादले भारतीय समाजको बारेमा भनेका थिए, "जब पैसा बोल्न सुरु गर्छ, त्यसपछि सबै चुप लाग्छन्" अर्थात् समाजमा धनीले जे गरे पनि गरिबले सहन्छन् वा धनीसँग असहमति प्रकट गर्न सक्दैनन् ।
नेपाली सिनेमा किन हेर्ने?
मेरा परिचितहरु मध्ये करिब ७५ प्रतिशतले नेपाली सिनेमा नहेर्ने बताउँछन्, उनीहरु हेर्दै हेर्दैनन् कि हेरेर पनि झुट बोल्छन् । त्यो उनीहरुलाई नै थाहा होला । तर म धेरै पछिसम्म पनि नेपाली सिनेमाको नियमित दर्शक थिएँ, पछि विभिन्न कारणले नेपाली सिनेमा हेर्न छोडें ।